अक्षय कुमार पुनः बने सबैभन्दा धनी बलिउड सेलिब्रिटी : यस वर्ष कति कमाए ? - The Public Today
अक्षय कुमार पुनः बने सबैभन्दा धनी बलिउड सेलिब्रिटी : यस वर्ष कति कमाए ?
४ पुष २०७६, शुक्रबार १०:०८
एजेन्सी : फार्ब्सले सन् २०१९ को सेलिब्रिटी १०० को सूची सार्वजनिक गरेको छ । उक्त सूचीमा अक्षय कुमारले दोस्रो स्थान हासिल गरेका छन् ।
अक्षयका लागि सन् २०१९ निकै शानदार रह्यो । उनको तीनवटा फिल्म केसरी, मिशन मंगल र हाउसफूल ४ रिलिज भइसकेको छ भने गुड न्यूज रिलिजको संघारमा छ । केसरीले १३५ करोड, मिशन मंगलले २००.१६ करोड र हाउसफुल ४ ले २०६ करोड जम्मा गरेको थियो ।